Golaha Aqalka Sare oo maanta ka doodaya Hindisaha Xeerka Guddiga La-dagaalanka Musuqa – Kalfadhi
Kulanka 8-aad ee Golaha Aqalka Sare ayey Senataradu maanta uga doodayaan Hindise Sharciyeedka Dhismaha Guddiga La-dagaalanka Musuq-maasuqa ee Madaxa-banaan. Kulanka, oo hadda furmay, waxaa xarunta Golaha ku sugan 32 Senatar. Wasiiro ka tirsan Xukumadda ayey Kalfadhi heshay iney joogaan Golaha.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, oo furay kulanka, ayaa sheegay in sharcigaan uu yahay mid in mudda ah horyaala Golaha, si fiicanna looga soo shaqeeyay, waxa uuna codsaday in la galiyo dood waxyabihii laga badalay. Goluhu waxaa Hindisaha ay maanta ka doodayaan ay horay u soo marsiiyeen Aqrinta 2-aad. Maalintaas waxaa ay Senatar Zamzam Ibraahim Cali, oo ah Gudoomiyaha Guddiga Cadaaladda iyo Xuquuqul Insaanka ee Aqalka Sare, sheegtay iney Sharcigan meelo badan ka fiiriyeen.
“Sharcigu waxa uu dhisayaa Guddi 9 Xubnoo ka kooban, kuwaas oo ka imanaya qeybaha bulshada. Hal gabar ayaa ku cadeyd markii hore, annaguse waxaan ka dhignay in ay haweenku noqdaan labo. Sidoo kale, waxaa ku jiri doona Xubin ka socota Ururrada Naafada, taas oo ruuxeeda laga yaabo in ay haween noqoto” ayey tiri Senatar Zamzam.
Tabinta Tooska ah, kala soco Feysbuugga Kalfadhi.